Domain name Mail — MYSTERY ZILLION
Domain name Mail
February 2009 edited April 2009 in Other
ကျွန်တော် domain name mail accout လုပ်နေတယ်...domain name က co.cc မှာလုပ်တယ်.. ဒါမျိုးတွေသူ့ဆီမှာရတယ်ဆိုလို့
<img width="0" height="25"><img width="100" height="0">Co.CC supports for CNAME, A, MX, NS records!
အဲ့ဒါနဲ့ google application ကနေ mail လုပ်တယ်.. example : [email protected] အဲ့လိုအကောက်မေးလ်လုပ်ထားတယ်..
ကျွန်တော်မရတာက အဲ့ဒီ CNAME, A, MX, NS အဲ့ဒါတွေလုပ်မတတ်ဘူး..
လုပ်နေတာလဲကြာနေပြီးး ၁ပတ်ကျော်နေပြီးး:O ဟိုလူမေးလဲမသိ.. ဒီလူမေးလဲမသိနဲ့. တစ်ချို့ ကကိုယ့်ကိုတောင်ပြန်မေးနေတယ်.. အဲ့လိုရတော့မိုက်တာပေါ့ ဆိုပြီးး
(ကူညီပါအုံးဗျာ.. အဲ့ဒါလေးးရင်ရင် ကျွန်တော် တစ်အား၀မ်းသာမှာ ..အမှန်ပြောရင်အိပ်ရင်တောင်
စိတ်ကအဲ့ဒီမှာပဲရှိတယ်... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနဲ့..
အကိုတို့ရေ ကူညီပါအုံးနော်... ကျွန်တော့် Gtalk ထဲမှာတစ်ခြားလူကလုပ်ထားတာရှိလို့ ပါ..သူကိုမေးတော့သူလဲမမှတ်မိတော့ဘူးးတဲ့..
ဒီ pdf ebook လေး က အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်... စမ်းကြည့်ပါ...
mmwordpress.com က စာအုပ်လေးပါ။
:106:လုပ်တာကတော့ လုပ်ပြီးသွားပြီး.... pdf ဖိုင်မှာကတော့ နာရီခွက် တစ်နာရီ ။ အခုထိတော့
ဘာမှ activate မဖြစ်သေးဘူးး.. 48 hours စောင့်ရမယ်နဲ့တူတယ်.. ပထမတစ်ခုမှာလုပ်ထားတာ
ရှိတယ် ၄၈ နာရီစောင့်မှ activate ဖြစ်တယ်..ဒါပေမယ့်ဗျာ MX record တွေမှမလုပ်ထားတာ
လုပ်မတတ်တာပါတယ်.. ပထမ CNAME record နဲ့လုပ်နေတာ... မရဘူးး
အခုုသူ့ကိုလဲသုံးမရဘူးးဖြစ်နေတယ်.. ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဗျာ.. အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ ကအတည်လုပ်ချင်တာ .. အဲ့ဒီ domain name နဲ့ လုပ်ချင်တယ်.. ဖျက်လိုက်ရင်လဲ ၅ ရက်စောင့်ခိုင်းတယ်.. ဖျက်လိုက်ရမလားး ...စဉ်းစားပေးကြပါအုံးနော်..
ပြောပြပေးကြပါအုံးနော်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..layong ကို
မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ မဖျက်ပါနဲ့ဦး။ လုပ်တာ နည်းနည်းမှားနေလို့ပါ။
နောက်ပြီး ဒိုမိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ ဘလော့လည်း ရှိမှာပေါ့။ အဲဒီဘလော့က blogspot က လုပ်ထားတဲ့ဘလော့လား။ ဒါမှမဟုတ် hosting တင်ပြီး ကိုယ်ဘာသာ လုပ်ထားတဲ့ဟာလား။ hosting တင်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ထားတဲ့ဟာဆို၇င် နောက်တစ်မျိုး စမ်းလို့ရပါသေးတယ်။ အမှန်က co.cc မှာတင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ အောက်ဆုံးမှာပါတယ်။ နေရာတော့ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါ။ အဆင်မပြေရင် ပြောပါ။ ကူညီပေးပါ့မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လုပ်တာ blogspot မှာပါ.. အဆင်မပြောပါဘူးး.. co.cc ရဲ့ဘယ်အောက်မှာ
လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါနော်.. ဒီလိုပေါ်နေတယ် အီးမေးလ်နေရာမှာ
It looks like your domain is configured incorrectly အဲ့ဒါဘာဆက်လုပ်ရမလဲခင်ဗျာ
ကူညီပေးပါနော်.. CNAME record နဲ့ပဲလုပ်ရမလားး ?
HTML file နဲ့ က ဒီစာတန်း အနီ mail နေရာမှပြနေလို့ It looks like your domain is configured incorrectly
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို သတိမထားမိလို့....
google apps ကနေ ကုဒ်လေးယူပြီး co.cc က အောက်ဆုံးမှာ...
မှာ ထည့်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်....